Neymar Oo Lagu Abaalmarinayo Kabtanka Xulka Qaranka Brasil. – Radio Daljir
Neymar Oo Lagu Abaalmarinayo Kabtanka Xulka Qaranka Brasil.
Maarso 29, 2017 4:38 b 0
Xidiga kooxda Barcelona iyo Xulka dalka Braziil Neymar ayaa lasheegayaa in laga dhigi doono kabtanka Hogaaminya Xulkiisa taas oo abaal marin looga dhigi doono.
Neymar oo iska Casilay Kabtannimada Xulkiisa markii uu la kulmay dhaleeceyn aad u weyn ayaa hada Waxaa lasheegayaa in dib loogu celin doono isaga oo Noqon doona Hogaamiyaha rasmiga ah ee Xulka Braziil.
Cayaaryahanka ayaa qayb weyn ka ahaa qaab Cayaareedkii layaabka lahaa ee uu soo bandhigay 7 dii kulan ee ugu dambeeyey ayaa Macalinka Braziil Tite Waxa uu doonayaa in Xidigaan uu abaal marin uga dhigo Kabtanka Xulkiisa Waxaana hadii uu qaab Cayaareed fiican soo bandhigo kulanka Paraguay Toos loogu dhiibi doono kabtanka Braziil.
Wasiirada magacaaban oo barlamaanka la horgeyn doono.
Adam Lallana Oo Mudo Garroomada Ka Maqnaan Doona.